Sh.Cali Dheere "Faransiisku Kibir ayuu nagu soo weeraray Sanka ayaan Ciidda u gelinay" Dhagayso.
Written by Maamul on 14 January 2013. Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sh.Cali Maxamuud Raage " Sh.Cali Dhere" oo galabta Shir Jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay Howlgalkii Fashilmay ee ay Kumaandoosta Faransiisku ka fuliyeen Degmada Buulo-Mareer iyo Dagaalka ay hada ka wadaan Wadanka Maali isagoona talooyin u gudbiyay Mujaahidiinta Wadankaas Jihaadka ka wada.
Sh.Cali Dheere ayaa sheegay in ay Faransiiska kaga adkaadeen Weerarkii uu kusoo qaaday Buulo-Mareer aya afka Ciida u dareen Askar fara badan iyo Sarkaalii hogaaminayay, wuxuuna Mahada Allaah kadib bogaadin u jeediyay Ciidamadii Muslimiinta ahaa ee u babac dhigay Gaalada Faransiiska ah, kuwaas oo uu sheegay in ay Ummada Soomaaliyeed Sharaf iyo Qiimo usoo hooyeen.
Afhayeenka ayaa sidoo kale ka hadlay Weerarka ay Faransiisku hada ku hayaan Mujaahidiinta Wadanka Maali, wuxuuna sheegay in Dagaalkaas uu yahay Dagaal Saliibi ah wuxuuna ku dhiiri-geliyay Mujaahidiinta Wadankaas in Sabraan Allaah-na ku xirnaadaan Gaaladuna ay dhawaan jebeyso Insha'allaah.
Shirka Jaraa'id oo oo Dhamaystiran Halkan ka Dhagayso.